Zvigadzirwa vatengesi uye Fekitori - China Zvigadzirwa Vagadziri - Chikamu 2
Chaiyo Sefa mwenje mwero kusapindirwa seti
Ichi chigadzirwa chinonyanya kushandiswa mukiriniki yekumisikidzwa kwemishonga inokanganisa photochemical kudzikisira uye anti-bundu zvinodhaka. Kunyanya inokodzera iyo kiriniki infusion yeaclitaxel jekiseni, cisplatin jekiseni, aminophylline jekiseni uye sodium nitroprusside jekiseni.
Infusion yakagadzirirwa kushandiswa kumwechete (DEHP yemahara)
"DEHP mahara zvinhu"
Iyo DEHP-yemahara yekumisikidza seti inoshandiswa nehupamhi huwandu hwevanhu uye inogona kutsiva zvachose iyo yechinyakare infusion yakatarwa. Vacheche, vana, vachiri kuyaruka, vakadzi vane nhumbu, vakadzi vanoyamwisa, varwere vakura uye vasina hutano nevarwere vanoda kumisikidzwa kwenguva refu vanogona kuishandisa zvakachengeteka.
Nomazvo Sefa aizomupa yakatarwa
Kuregererwa kusvibiswa kwechetura mukumisikidza kunogona kudzivirirwa.
Zvidzidzo zvekiriniki zvakaratidza kuti chikamu chikuru chekiriniki chinokuvadzwa chinokonzerwa neiyo infusion set inokonzereswa neasina kubhururuka zvidimbu. Mukurapa kwekurapa, zvidimbu zvakawanda zvidiki pane gumi neshanu μm zvinowanzo gadzirwa, izvo zvisingaonekwe neziso uye kushaya hanya nevanhu.
TPE chaiyo sefa infusion yakatarwa
Iyo membrane chimiro auto stop fluid infusion set inosanganisa auto stop fluid uye yekurapa mhinduro kusefa mabasa. Mvura yacho inogona kumiswa zvakadzikama kunyangwe kana chinzvimbo chemuviri chashandurwa zvakanyanya kana kuti infusion ikasimudzwa kamwe kamwe. Iko mashandiro anoenderana ne, uye kunyange nyore kupfuura ayo akajairika infusion seti. Iyo membrane chimiro auto inomira fluid infusion seti inokwikwidza zvakanyanya uye ine nani musika tarisiro.
Auto stop fluid chaiyo sefa infusion set (DEHP yemahara)
Auto mira fluid chaiyo sefa infusion yakatarwa
<< <Yapfuura 12345 Inotevera> >> Peji 2/5